Maoritania: Antanantohatra arabolonkoditra toa tsy laitran’ny fanovana · Global Voices teny Malagasy
Mbola voazarazaran'ny volonkoditra ny firenena
Voadika ny 23 Jolay 2020 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Deutsch, Español, عربي, Français
Saripikan'ny mariazy nentim-paharazana iray ao Atar ao Maoritania avy amin'i Radosław Botev, azo ampiasaina malalaka ao amin'ny Wikipedia
Ao Maoritania izay ahitana karazam-poko, toa minia manampi-tsofina amin'ny hetsika fitakiana manerantany Black Lives Matter (BLM na Misy Vidiny ny Ain'ny Mainty) ny governemanta, manohy ny politika izay mamokatra hatrany ilay fanavakavaham-bolonkoditra tsy tia mainty raiki-tapisaka ao anaty rafitra.
Ilay sarin'i “George Floyd Maoritaniana” nahahendratra
Raha maneho ny fahatafintohinany [mg] amin'ny fahafatesan'ilay Afrikana-Amerikana George Floyd izao tontolo izao, notaterin'ny fampitam-baovao maro ny sary nopihana tamin'ny 23 jona 2020 mampiseho polisy roa mandohalika ambonin'ny soroky ny lehilahy mainty iray nahohoka tamin'ny tany tao amin'ny faritra El-Minaa tanàna itatra atsimo andrefan'i Nouakchott, renivohitr'i Maoritania, anisan'ny nitatitra ny France24. Nisongadina any amin'ireo sioka maro ihany koa io sary nahahendratra io:
Mampahatsiahy antsika izay nitranga tamin'i George Floyd ity sary ity, ary mampahatsiahy antsika ihany koa fa mbola betsaka ny asa miandry antsika ao Maoritania.
Na inona na inona antony nisamboran'ny polisy ity olona ity, nahatafintohina ihany koa ity sary ity satria nitranga teto Afrika, ary mampahatsiahy ny fomba nataon'ilay manamboninahitra polisy Amerikana Derek Chauvin tao Minneapolis tamin'ny 25 mey 2020 hanakendaroroka an'i George Floyd.
Antanantohatra ara-poko toa tsy laitran'ny fanovana
Maro ny mpandinika manazava amin'ny ampahany ny fihetsiky ny polisy maoritaniana amin'ny fanakavakavaham-bolonkoditra raiki-tapisaka ao anaty rafitra izay mbola hita hatramin'izao ao amin'ny firenena. Mbola tsy nofoanana ny fanandevozana raha tsy tamin'ny taona 1980, matetika noho ny volonkoditra no ametrahana ny toeran'ny olona iray.
Fiaviana Arabo-Berbera ny Bidhân, na “Maoro Fotsy”, ary mandrafitra ny 53 isanjaton'ny mponina, ary ireo no manjaka ara-politika. Ao amin'ny tafika, “saika ny telo ampahaefatra amin'ny jeneraly maoritaniana no Maoro fotsy.” Ambanin'ny rafitra no misy ny Haratin, na “Maoro Mainty”, izay mandrafitra ny 34 isanjaton'ny mponina. Ireo Haratin ireo dia taranak'ireo noandevozin'ny Bidhâns, ary miteny arabo ihany koa. Misy ihany koa ireo vondrom-poko Afrikana atsimon'i Sahara fiaviana izay mandrafitra ny 13 isanjaton'ny mponina.
Misy fiantraikany lalina sy ratsy ho an'ny vahoaka tsy-Bidhân izay mandrafitra ny 47 isanjaton'ny mponina izany antanantohatra izany. Niresaka izany olana izany ao amin'ny tranonkala Maliana malijet.co i Ciré Ba, Maoritaniana mpikatroka zon'olombelona monina ao Paris:
Taratry ny fanavakavahana arabolonkoditra ara-drafitra izay vatan'ny fanjakana maoritaniana ny fanilikilihana eo anivon'ny tafika. Azo jerena eo amin'ny ambaratonga hafa rehetra amin'ny fiainam-pirernena izany, indrindra fa eo amin'ny asam-panjakana sy ny fitantanana ambony, fampianarana, fahasalamana, fampahalalam-baovao (torohay), eo amin'ny fiainana ara-toekarena. Endrika bitika fotsiny ny fampiatiana amin'ny alalan'ny fiteny arabo.
Hita ho tsy mihevitra ny hanova ny toedraharaha ny manampahefana ary mbola manamafy ny fahefany. Tokony ho jerena ao amin'izao toe-draharaha iizao, araka izay misongadina ao amin'ny fanehoan-kevitra iray ao amin'ny vondrona Facebook Miampanga ny Favakavaham-bolonkoditra tamin'ny septambra 2019, ny (fomba) fandraisana mpianatra ho manamboninahitra miisa 47 tsy ahitana mainty hoditra:
Fahatafintohinana goavana ny fandraisana mpianatra ho manamboninahitra miisa 47 tsy ahitana Haalpulaar, Soninke, na Wolof [foko mainty telo betsaka indrindra ao amin'ny firenena]. Ary raha jerena ny fotokevitra fitoviana eo amin'ny olompirenena, dia fanohizana ny politika fanimbàna ny firindrana ara-piarahamonina izao fandraisana mpianatra izao. Amin'ny hetsika tahaka izao, amin'ny fanapahankevitra feno fiangarana sy politika tsy ara-drariny tahaka izao, voatosika hahatsapa ny olona sasany fa tsy manana toerana eto amin'ity firenena ity ny olona sasany
Izzo Wane avy ao Maoritania, mpikaroka taloha tao amin'ny Silicon Valley, niteny ny fanavakavaham-bolonkoditra niainany tao amin'ny lahatsoratra bilaogy iray tamin'ny 6 Jona:
Mbola manjaka ao amin'ny firenena niaviako ny fanavakavahana ara-bolonkoditra. Voamariko izany nandritra ny fitsidihako ny firenena volana vitsivitsy lasa izay ary maro amin'ny olona akaiky no miteny amiko fa “normal” izany ary “ela niainana loatra” tany ivelany aho. Matoky aho fa efa niaina toejavatra teo amin'ny fiainany, matetika mandratra fanahy mifandraika amin'ny volonkodiny ny Maoritaniana mainty tsirairay… Vao andro vitsy lasa izay no novonoin'ny tafika i Abass Diallo, Maoritaniana mainty.
Maoritaniana maro no niontana tao amin'ny Twitter tamin'ny famonoana an'i George Floyd:
Maoritania: nahatafintohina ny vondrom-piarahamonina mainty ny fisamborana an'i “George Floyd Maoritaniana”
Miantso firaisankina eo amin'ny samy Afrikana ihany koa ny mpaneho hevitra, ary misy ny miantso ny Afrikana mpitarika haka fijoroana:
Niainako tao Nouakchott izao. Teo amin'ny fandoavambolan'ny fivarotana finday iray aho hividy sim raha nanosika ahy handray ny toerako ny vehivavy Maoro iray. Andeha hamaly aho no niangavy ahy ny zatovolahy mainty iray: “Aza manao izany fa mety ho saritahan'ny olona eto ianao.”
Firenena mpanandevo sy mpanavakava-bolonkoditra i Maoritania.
Fomba ilay kitakita amin'olona ao amin'ny faritra na ny mihoatra izany aza. Raha misy firenena izay tsy mikaonty ny ain'ny vahoaka mainty hoditra, dia ny repoblika Islamika mpanandevo ao Maoritania.
Tsy maintsy miteny amin'ity lohahevitra ity ny mpitarika hafa… [je suis] Charlie ry zareo saingy mikimpy maso amin'ny tsy rariny/tsy fahazakana mitranga ao amin'ny kaontinantany. Tsy izao no Afrikan'i Lumumba, Nyobe, Cabral ary Sankara. Andao hitsangana ary hanasazy an'i Maoritania.
Mahita ny tranonkala Ivoariana iciabidjan (@iciabidjancom) fa mbola fahita mahazatra ao Maoritania ny fanandevozana:
Taorian'ny fahafatesan'i George Floyd any …Etazonia, niontana amin'ny fanehoany ny fahatafintohinany ny Vondrona Afrikana sy ny CEDEAO. Tsara izany. Fantatr'ireo Andry lehibe roa ireo ve fa ao amin'ny kaontinanta ihany, any Maoritania ankoatra ny hafa, dia mbola fomba mihatra soa amantsara ny fanandevozana? Andao diovina aloha ny tokotanintsika…
Ho an'ny manampahefana Maoritaniana, tombony miavaka azony avadika ho hirika tsara ny fiorenan'ny firenena manelanelana an'i Afrika Avaratra sy Afrika Atsimon'i Sahara. Saingy raha te-hanao izany dia mila mamarana ny politika manavaka sy manilika ny efa ho manasaka ny mponina ao aminy ry zareo.